Umatshini we-Lathe we-CNC uyathengiswa, ukusika kwesinyithi, umenzi wase China kunye nomthengisi
Ulapha: Ekhaya1 / Umatshini we-Lathe we-CNC uyathengiswa, ukusika kwesinyithi, umenzi wase-China kunye nomthengisi ...
PRECISION LATHE KOMATSHINI WOKUSIKA IMETE
Umatshini we-lathe we-CNC lukhetho olufanelekileyo ukuba uneziqwenga ekufuneka zenziwe ngobunzima. Inokulawula ngokuzenzekelayo ujikelezo lomsebenzi kunye nokuhamba kwesixhobo ngenkqubo yolawulo lwenombolo, akukho mfuneko yokulawula ngesandla. Umzekelo, ufuna amakhonkco aliqela ngobukhulu obahlukileyo acutshungulwa kwibar ejikelezayo, i-lathe inokuqhubekekisa ngokuzenzekelayo amakhonkco ngokufaka ubungakanani obuhambelanayo kunye nekhowudi yokuhamba kwinkqubo yenkqubo. Emva kokugqitywa kokuqhubekeka, ungawubuyisela endaweni umsebenzi omtsha, okanye unokuthi uqwalaselwe ngombane ozisebenzelayo (iirobhothi), uphucula kakhulu ukusebenza ngokukuko.
Ukukhethwa kwe-lathe ye-CNC kuxhomekeke kubukhulu bendawo yokusebenza kunye nohlobo lokuqhubekeka, ngokobungakanani beemfuno ezizenzekelayo zinokuqwalaselwa zisebenza ngobuqhetseba kunye nokususa isixhobo esizenzekelayo se-chip. Thina i-Tsinfa sinomatshini we-CNC lathe, ukuchaneka okuphezulu, ukuzinza okuhle, kunye nokuhluka kugqityiwe, kulungele ukuthengwa kwakho okukodwa.
Imibuzo?Sinike umnxeba ku + 86-15318444939, Kwaye uthethe nenye yeengcali zethu.Unokugcwalisa ifom yethu yoqhakamshelwano.
Cnc lathe umatshini LTK6136
Machining ubukhulu: 300 / 360mm
ubude bomsebenzi: 500/750 / 1000mm
Cnc lathe umatshini LTK6140
Machining ubukhulu: 400mm
I-750/1000/1500/2000 / 3000mm
Cnc lathe umatshini LTK6150
Machining ubukhulu: 500mm
Cnc lathe umatshini LTK6180
Machining ubukhulu: 800mm
Yintoni i-CNCUmatshini weLathe?
I-CNC lathe ngumatshini wokusika wesinyithi ozenzekelayo olawulwa yi-CNC. Isetyenziswa ngokubanzi, inokujikwa, imingxunya kunye nokuphela.
Ekuqaleni kokusetyenziswa kufuneka simisele inkqubo yokuqhubekeka komsebenzi, ukubopha umsebenzi, ukulungiswa, ukusetyenziswa kwesixhobo. Ukunyuswa kwencwadana yemigaqo, intshukumo eqhubekayo okanye ukusetyenziswa kwediski eshukumayo yokuhambisa lathe. Qhagamshela ekuqaleni kwenkqubo kwaye uhambelane nesalathiso sesixhobo. Qalisa ukulungelelanisa ukutya kwaye uqhubeke nokuchwetheza. Ngexesha lokuqhubekeka, iqhosha lokuXHASWA linokucinezelwa, ukunyakaza kokutya kunokunqunyanyiswa, kwaye iimeko zokuqhubekeka zinokujongwa okanye zilinganiswe ngesandla. Cinezela iqhosha leCYCLESTART kwakhona ukuze uqalise ngokuqhubekeka. Ukuqinisekisa ukuba inkqubo ichanekile, kufuneka iphononongwe kwakhona ngaphambi kokuqhutywa.
Ukuchaneka kwe-CNC lathe machining kuphezulu, kunokutshintsha ngokuzenzekelayo isixhobo, Ukugqitywa okuqhubekayo kweenkqubo ezininzi. Isixhobo esibaluleke kakhulu ekusikeni isinyithi. Isixhobo esibalulekileyo sokuchaneka kwebhetshi kunye nokusika kwesinyithi.
Ukujikeleza kwe-motor Servo ngokulawulwa kwenkqubo ye-CNC, ukutya okuzenzekelayo, okulungele ukucwangciswa kwebhetshi.
Ukhuko ebhedini, chip elula, anti-ukugoba kunye anti - ijija ubuchule is.The.The olusebenzayo isithuba, ukunciphisa kakhulu indawo moya kumatshini.
Umngxuma wokuluka omkhulu we-CNC we-lathe we-lathe we-lathe unokuzenzekelayo nangokufanelekileyo ukugqiba ukusika kwazo zonke iintlobo zombhobho othe tye kunye nemisonto yombhobho.
Yongeza i-axis ye-C kunye nentloko yamandla, ngokuguqula umsebenzi wekhamera, iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo.
Iindidi zeCNCUmatshini weLathe?
Ngokutsho kwicala yokuluka, zingahlulwa zibe: lathe nkqo CNC kunye lathe tyaba
Ngokuya kuhlobo lwendlela yesikhokelo, unokwahlulahlulwa ube: I-CNC yomgaqo wesikhokelo sendlela kunye nomgaqo kaloliwe oqinisiweyo.
Ngokutsho ukuthambeka kwebhedi, zingahlulwa-hlulwa: CNC ibhedi caba lathe kunye ne-CNC slanting bed lathe.
Ngokutsho kwenkqubo yokwenza yahlulwe: Jikelele CNC lathe, CNC ipayipi intambo lathe kunye nokujika umatshini
Ukusetyenziswa kweCNCUmatshini weLathe?
I-lathe ye-CNC idlala indima engenakuphikiswa kwimveliso kunye nasekwenzeni isilinda, ishafti yokuxhuma imoto, ukuthwala kunye nevili levili. Isetyenziselwa ulondolozo lweehabhu zikaloliwe kunye nomzi mveliso wepetroleum onxulumene nokutsalwa kweoyile, imibhobho yemichiza kunye nokuphononongwa komhlaba. Kwimveliso yezixhobo, izixhobo zekhompyutha, izixhobo zonyango, ukwakhiwa kweenqanawa kunye namanye amashishini nawo kufuneka asebenzise i-lathe ye-CNC.